DUGSIYADA GAARKA LOO LEEYAHAY IYO GANACSIGA WAXBARASHADA W/Q: Cabdifataax Rashiid Maxamed (Arsenal). | Togdheer News Network
3. Barashada iyo tarbiyadda Diinta lslaamku waa dariiqad asaasi ah; dhammaan heerarka waxbarashadana waa ku khasab, isla markaana horumarinta dugsiyada Qur’aanku waa waajib saaran Dawladda.
1. Waxbarashada gaarka ahi waxay burburisay hannaankii waxbarashada ee dalka iyada oo dhexgashay kuna milantay hawl maalmeedkii iyo hawlwadeennadii labadaba. Waxay samaysaa waxkasta oo ay iyadu u aragto inay ku faa’iidayso—cid kasta oo kale wax ha yeeshee. Tusaale ahaan waxay labadii sano ee ugu danbeeyay diideen inay fuliyaan ugu yaraan afar wareegto oo wasaaradda waxbarashadu soo saartay. Waxaa ka mid ahaa wareegto ku amraysay in dugsiyada hoose lagu dhigto afkeenna Hooyo (Soomaali). Waxay kaloo diideen wareegto wasaaradda waxbarashada ka soo baxday usbuucan oo lagu cayyimay furitaanka sannad dugsiyeedka waxbarashada ee 2018/2109 oo lagu amrayo in dhammaan dugsiyadu furmaan bisha 1da bisha Sibteember 2018. Waxay ganacsatadaasi sameeyeen inay si kasta iyo meel kasta ugu tagaan madaxda wasaaradda si ay ugu qanciyaan doonistooda, markay taasi suurtogali waydayna in ay shir jara’id Madaxweyanaha farriin uga diraan iyaga oo leh DANTAYADA AYAA WAX WALBA KA HORREEYA!!!.
2. Waxbarashada gaarka ahi waxay keentay in dalka lagu dhigo maanta 20 Manhaj oo kala duwan. Manhajyadaas oo laga soo ergistay dalal kala duwan, kuwaas oo leh siyaasado kala duwan; dhaqanno kala duwan iyo ujeeddooyin kala duwanba oo dhammantood ka duwan manhajkii qaranka. Tani waxay keeni kartaa in ubadkeenna dugsiyadaas kala duwan ka soo kala baxaa ay yeeshaan aragtiyo kala duwan taas oo khatar ku ah midnimada iyo horumarka dalka. Tusaale ahaan manhajyadaasi waxay soo saari karaan muwaadin aaminsan inay bannaan tahay inuu isku qarxiyo bulshada uu la nool yahay, ama muwaadin aaminsan in qofku u dhasho in uu noqdo laga roone (Guy), ama muwaadin aaminsan in aanay muhiim ahayn diinta iyo waxa uu rumaynayo oo uu isagu xor u yahay.
3. Waxbarashada gaarka ahi waxay keentay in caruurteennii xarumo lagu uruursado, iyada oo aan waxbarashadooda iyo barbaarintooda masuuliyad layska saarayn. Laakiin laga qaadayo lacago badan oo magacyo badan leh, kuwaas oo marka laysu geeyo aan ka yaraanayn mushaharka shaqaalaha dawladda ee bishii oo ah (SHSL800,000—SHSL1,000,000). Tani waxay ku tusaysaa in ilmo yar waxbarashadiisii ay ka qaalisan tahay xaddiga lacagta dawladu ugu talogashay in qoys shaqaale dawladeed ahi ku noolaado. Waxaa dhacda in xattaa lacagahaas xad dhaafka ah aan macallimiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay aan la siin. Sidoo kale lacagta intaas leeg waxaa layaab ah in ganacsatadaasi ay dhowr magac u kala bixiyaan sida:1. lacagta bisha (fee ga) iyo baska. 2. Lacag joogto ah oo maalin le ah oo daabacaadda waraaqaha casharrada iyo iibsiga buugaagta; shaqo guriga; imtaxaannada; nadaafadda IWM. 3. Lacag ta nusasaacaha ardayga—waxaa layaab ah in dugsi kasta mulkiilayaashiisu ka furtaan macmacaanlayaal—iyaga oo mamnuucaya in ardaygu gurigoodii ama meel kaleba ka soo qaato nusasaace, si uu ugu xidhnaado maheraddaa ay furteen, waalidkiina lagu qasbo in uu lacagtaas bixiyo!!!!!. Waxay noqotay markaa ubadkii yaryaraa ee ay ahayd in mustaqbal loo sameeyo oo labaro siday bulshada ugu dhexnoolaan lahaayeen ay noqdaan dheeman qaaliya oo la ilaashanayo, waxkasta oo ay doonayaanna lagu raalligalinayo. Marka ay sidaas tahay waxay soo saaraysaa waxbarashada gaarka ahi muwaaddin aqoon leh sida dhakhtar/injineer/macallin kaas oo maskaxda ku hayya lacagtii faraha badnayd ee waalidkii u soo huray, wax kasta oo uu qabanayana lacag uun ku qiimaynaya oon naxariis iyo dadnimo midna lahayn!!!!!!.
4. Waxbarashada gaarka ahi waxay keentay in dugsiyadii dawliga ahaa ay ku dhawaadaan inay xidhmaan sannadba sannad ka danbeeya. Dugsiyada dawliga ahi waa hanti ummadda oo dhan ka dhaxaysa, waa xarumaha loogu talagalay ubadka danyarta in wax lagu baro, waa xarumaha loogu talagalay in waddaniyadda caruurta lagu ababiyo laguna kobciyo, waa xarumaha ubadkeennu ay ka soo baran karaan isdhexgalka bulshada; wada lahaanshaha; midnimada iyo dhaqammo badan oo dawladnimada iyo horumarka tiir dhexaad u ah. Sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in layska kaashado sidii aan ganacsatadaas hantigoosadka ahi meesha uga saari lahayn dugsiyada dawladda. Waxaa muuqata in macallimiintii tayada lahayd oo dhan ay dugsiyada gaarka loo leeyahay wada tageen iyaga oo eeganaya gunnada ay siinayaan. Waxaa sidoo kale sannadkii hore soo ifbaxday in xattaa dugsiyadii dawladda ay mulkiilayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay doonayaan in ay la wareegaan—dugsiga Faarax Oomaar ee hargeysa ayaa mar lagu wareejin gaadhay mulkiilayaashaas—taas oo keeni karta in dugsiyadii dawladda qaarna xidhmaan qaarna gacantooda galaan!!!.
5. Waxbarashada gaarka ahi waxay noqotay in gacantooda ay galaan arday ka badan inta dhigata dugsiyada dawladda, taas oo keeni karta inay yeeshaan awood iyo saamaynta qaybaha kala duwan ee dawladda sida garsoorka; fulinta iyo sharci dajinta. Waxay u eegtahay inaynaan ka fogayn halkii uu gaadhay FATXULLAH GULLAN kii Turkiga ee habkii dawladnimada ee Turkiga ku dhex milmay yeeshayna awood iyo dhaqaale, Markii ugu danbaysayna isku dayay inuu inqilaabo dawladdii jirtay!!!!!!!!!!!!!!!!.
 Waxaa loo baahan yahay in wasaaradda waxbarashadu diyaariso xeerar, siyaasado, istaraatiijiyado ku saabsan sidii loo xakamayn lahaa waxbarashada gaarka ah ee xadhkaha goosatay. Sidoo kalena waxaa loo baahan yahay in xukuumaddu ay ku garab istaagto fulinta go’aammada ay gaadho. Tusaale ahaan go’aanka wasaaradda waxbarashada ee ay sannadkan ku cayyintay wakhtiga furitaanka dugsiyada waa in bilayska, sirdoonka, wasiirka arrimaha gudaha, badhasaabbada, maayarradu dhammaantood ku garabsiiyaan siduu go’aankaasi u fuli lahaa.
 Waxaa loo baahan yahay in miisaaniyadda iyo maamulka waxbarashada la siiyo muhiimadda koowaad ee dawladda. Taas oo keenaysa in dugsiyada dawladdu noqdaan kuwo tayo ahaan iyo sumcad ahaanba ka sarreeya dugsiyada ganacsatada waxbarashada.
 In xukuumaddu joojiso dhammaan manhajyada kala duwan ee dalka lagu dhigo, Manhajka qarankuna noqdo ka kaliya ee dugsiyadu dhammaan dhigtaan.
 In qorshe loo sameeyo waxbarashada gaarka loo leeyahay kaas oo si dhow ula soconaya, iyada oo lacagaha xad dhaafka ah ee siyaabaha kala duwan looga qaado ubadkana meesha laga saarayo.
 In xukuumaddu ku soo rogto cashuur lacagaha ay qaadaan dugsiyada gaarka ahi, iyada oo 20%-30% cashuur ahaan dawladdu u qaadaysa.
 In dawladdu la wareegto dhammaan dugsiyada iyo xarumaha mashaariico carbeed ama meel kaleba laga soo qaatay ee shakhsiyaadka gaarka ahi ku shaqaystaan. Mashaariicaha dugsiyada iyo xarumaha laga dhisay waa deeq dalku leeyahay waan sharci darro in cid gaar ahi ay yeelato.
 In wacyigalin ballaadhan la sameeyo oo bulshada lagu fahansiinayo muhiimadda dawladnimada iyo wadalahaanshaha. Waxaa loo baahan yahay in muwaadiniintu ogaadaan in waxbarashada iyo caafimaadka loo baahan yahay in ay noqdaan adeeg cidkastaa heli karto oo xarumaha dawladda si bilaash ah bulshadu uga heli karaan.